5 extension Safari izay hanatsara ny traikefanao iOS 8 Vaovao IPhone
5 extension Safari izay hanatsara ny traikefanao iOS 8
Cristina Torres sary placeholder | | Fampiharana iPhone
Angamba rehefa miresaka momba ny traikefa fitetezana amin'ny terminal finday isika, ny fifandraisan'ny rafitra fiasa izay iasantsika dia misy ifandraisany betsaka. Saingy tsy latsa-danja kokoa ny fitazonana traikefa tsara, ny endrika ary ny fiasan'ny navigateur amin'ny ankapobeny. Raha ny momba an'i Apple dia Safari no tena ilazana azy, ary isaky ny nambara ny kinova vaovao an'ny OS dia tonga ny fiovana izay mameno ny fitaovany fitetezana ihany koa. Mandritra izany fotoana izany, kinova vaovao an'ny Safari ho an'ny iOS, miova ihany koa ny zavatra, manavao ireo fiasa vaovao manatsara ny bibikely ary manampy zavatra hafa azo atao.
Satria satria Safari no mpizahatany izay manaraka ny iOS, satria marina fa avy any Apple izy io, ary koa noho ny fahafahanay mizara azy amin'ny sehatra Mac OS X, anio dia te hiresaka aminao momba ny fahazoana fampisehoana bebe kokoa amin'izany noho ny fivoahanao amin'ny iPhone-nao. Azo antoka fa ho tsara kokoa i Safari amin'ny volana ho avy, miaraka amin'ny fahatongavan'ny asa vaovao, fa mandra-pahatongan'izany, ny sasany amin'ireo tena azo ampiharina dia efa eny an-tsena, ary mila manampy azy ireo amin'ny fametrahana mora fotsiny ianao amin'ny alàlan'ny fanitarana safari. Raha ny marina dia rindranasa alaina ao amin'ny App Store ihany koa izy ireo, araka ny fahitanao azy, saingy miasa amin'ny navigateur Apple izy ireo.
1 Safari extensions tokony andramanao
1.3 Mail to mandefa
1.4 Inona no Font
Safari extensions tokony andramanao
Manomboka ny lisitra amin'ny iray amin'ireo fanta-daza indrindra izahay, saingy tsy noho izany antony izany, tsy dia ilaina loatra. Azo inoana fa mihoatra ny iray no manana an'io toy ny volamena amin'ny lamba ao amin'ny iPhone, fa raha mbola tsy nametraka azy ianao dia tokony hieritreritra fa raha manao izany ianao dia afaka manadino ny mamela ireo takelaka hisokatra na tsoratadidy ao anaty Safari ary avy eo miverina, miaraka amin'ny fotoana bebe kokoa amin'ny fampahalalana. Ity app ity dia manamora ny asanao rehetra ary tsara ny endriny. Ho fanampin'izany, maimaim-poana tanteraka izany.
Iray amin'ireo iray amin'ireo fampiharana fitadiavana izay mety tena ilaina amin'ny mpampiasa maromaro izany. Ianao ve dia iray amin'ireo mividy amin'ny tranokala vahiny izay mampiasa vola hafa ary tsy mahalala akory hoe ohatrinona ny vidiny azonao amin'ny euro? Heveriko fa ho liana ianao, satria raha apetrakao io, isaky ny mivezivezy amin'ny Safari amin'ny zavatra mitovy ianao, dia hanova ny vola izany.
Mail to mandefa
Impiry ianao no te hanana zavatra amin'ny alàlan'ny mailaka hitanao ao amin'ny tranokalanao? Mazava ho azy fa misy safidy maro hafa noho ny fanaovana azy amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Azonao atao ny maka tahaka sy mametaka amin'ny mail, azonao atao ny maka sary ary mandefa izany aminao…. Saingy amin'ity tranga ity, miaraka amin'ny fanitarana, ny paompy tokana dia ho ampy hanatanterahana ny fizotrany. Tsy ratsy, marina?
Ny marina dia fantatro fa nisafidy an'ity fanitarana ity aho hametraka azy ao anaty lisitra satria tiako manokana ny endritsoratra sy izay rehetra misy ifandraisany amin'ny typography. Fa raha sendra liana amin'ny zavatra ampiasainy amin'ny toerana manokana ianao, na te hahazo aingam-panahy iray hahafahanao manatanteraka andiana volavolanao manokana, ity no fanitarana ilainao.
Mety tsy mila zavatra hafa ankoatry ny fiasa mahazatra an'ny iPhone handraisana pikantsary ianao. Fa raha toa ka kely loatra ny efijery mba hahafahanao misambotra izay rehetra eo amboniny, dia ho tonga famonjena anao io fanitarana io satria ahafahanao maka ny tranonkala iray manontolo, na ao anatin'ny faritra manodidina ny masonao izany na tsia. Ho fanampin'izay, azonao atao ny manitsy ny fakana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » 5 extension Safari izay hanatsara ny traikefanao iOS 8
Ho ahy iray amin'ireo tsara indrindra ny bing, izay ahafahanao mandika ireo pejin-tranonkala tsy misy olana
Chu dia hoy izy:
Manaiky tanteraka an'i Alfonso, mahagaga ny BING
Napetrako tamin'ny iPhone sy ny iPad izany
Fa tsy haiko ny antony fa amin'ny iPad dia miseho amin'ny Espaniôla, amin'ny iPhone dia miseho amin'ny CHINESE ny fampiharana !! (na dia manana fiteny Espaniôla aza ny fikirakirana) ary tsy afaka manova azy aho
Valiny tamin'i Chu
Vainglory dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao mahaliana